Confidential Assignment2မှာ Hyun Bin, Yoo Hae Jin တို့နှင့်အတူ YoonA ရောပါဝင်မှာလား..? | News Bar Myanmar
Confidential Assignment2မှာ Hyun Bin, Yoo Hae Jin တို့နှင့်အတူ YoonA ရောပါဝင်မှာလား..?
2017 ခုနှစ်ရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Confidential Assignment ကတော့ အခုအချိန်မှာ Season2ကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးမယ်ဆိုတာ သေချာသွားပါပြီ။
Season 1 ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Hyun Bin နှင့် Yoo Hae Jin တို့ကတော့ season2မှာလည်း ဆက်လက်ပါဝင်ကြမှာပါ။ နောက်ထပ်အဓိက သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ YoonA ပါဝင်ဖြစ်မဖြစ်ကိုတော့ ပရိတ်သတ်တွေက သိချင်နေကြပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာတော့ Munhwa llbo ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ YoonA ဟာ Confidential Assignment2မှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် ပါဝင်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခံထားရပါတယ်။ အခုချိန်အထိတော့ YoonA ကဇာတ်ညွှန်းကို လေ့လာနေတုန်းလို့ပဲ ပြောထားပါတယ်။ ပါဝင်ဖြစ်မဖြစ်ကိုတော့ အခုထိတော့ တရားဝင်မထုတ်ပြန်ရသေးပါဘူး။
တကယ်လို့သာ YoonA သာအခု Season2မှာပြန်ပါဝင်မယ်ဆိုရင် 2017 တုန်းကလို Hyun Bin, Yoo Hae Jin တို့နှင့်အတူ လိုက်ဖက်ညီစွာ ပြန်တွေ့ရဦးမှာပါ။ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ သူတို့သုံးဦးစလုံးကို ပြန်ဆုံကြမယ့် Confidential Assignment2ကို လုံးဝမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
အခုလောလောဆယ်မှာတော့ YoonA ဟာ Park Jung Min, Lee Soo Kyung နှင့် Lee Sung Min တို့နှင့်အတူတူ Miracle ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရော Confidential Assignment2မှာ YoonA ကိုပြန်တွေ့ချင်ပါသလား။ တစ်ခုခုပြောခဲ့ပါဦး။
Next Debut တစ်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ X1 အဖွဲ့ဝင်များ »
Previous « PSY ရဲ့ဖုန်းဆက်တာတို့ Message ပို့တာတွေကို ရှောင်ဖယ်နေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ HyunA